Munamato kuna Mutsvene Alejo. ? Kudzinga Munhu, Vanoda, Uye Vavengi
Munamato kuSan Alejo inoitwa kana tichida kuisa imwe nzvimbo pakati pedu nemumwe munhu nekuti kana zvaive kwaari kuti aite danho rekutama akamboita asina kutarisa kumashure.
Munamato unozadza isu nesimba uye unotipa pfungwa yekurasa kune avo vasingatiitire zvakanaka kana ivo vanogovanisa masimba asina kunaka.
Nenzira imwechete iyi munamato unogona kuitwa kubvisa humwe ushamwari hwakaipa kubva kuhama yepedyo.
Chishandiso chinotibatsira kuchengetedza runyararo mumba uye kuti kutenda kwedu kunowedzera zuva nezuva
1 San Alejo ndiani?
1.1 Namata kuna Saint Alexius kuti udzinge munhu uende
1.2 Munamato weSan Alejo wokuparadzanisa vanhu nevadikani
1.3 Kuti ndidzivise vavengi
1.4 Zve rudo
San Alejo ndiani?
San Alejo, uyo muhupenyu aive mudziviriri we Kutenda kwechiKristu. Akararama achinetseka nekudzidzisa vamwe misimboti yekutenda. Kutambudzika uye kurambwa nevamwe asi mudzidzisi mukuru wevamwe.
Iko hakuna chaiyo inozivikanwa zuva raakazvarwa uye nhasi anozivikanwa kuva mumwe we Vasande avo vanotibatsira kugadzirisa dzakaomarara mamiriro edu.
Murume aikwanisa kusiya hupfumi nemhuri nekuda kwaKristu, kutenda kwake kusingazungunuke kwakamutsigira apo aifamba mumigwagwa isina denga kana zvekudya asi aine chinangwa chakasimba chekuwedzera humambo hwaMwari nekuparidza shoko rake kune vese nyika.
Akazvitsaurira kunyanya kuvana, kuvadzidzisa shoko raMwari mukutsinhana kuruma chikafu. Muenzaniso wekutevera maererano nerudo uye kuzvipira pakutenda.
Namata kuna Saint Alexius kuti udzinge munhu uende
Ah makomborera Saint Alexius
Muenzaniso unokosha kwazvo worudo
Kuti wakashandira munhu wese waunokwanisa usingatarisire chinhu pakudzoka
Uye kukuratidza kuzvipira kwedu
Nekuti nekuzvininipisa kwako, uye nekupa, iwe wakawana rudo rwaMwari
Nhasi ndauya kuzokukumbira
Kuti iwe unobvisa kwandiri munhu asingadiwe, zvinondirwadza kwazvo
Sezvo iwe zvawaifamba kubva kuvabereki vako
Kugona kukura pamweya
Buda muhupenyu hwangu (zita remunhu), saka iwe unogona kurarama nerugare
Ndidzidzisei zvishoma nerudo rwamakapa muvakidzani wako
Kuti udzidze kushivirira
Kune vanhu vasingadiwe, uye isu hatigone kupatsanura
Iwe uri kurudyi rwaMwari
Ini ndinokumbira kuti undireverere pamberi pemeso ako
Kuti ndiwane nyasha pamberi pangu
Kundiita munhu ari nani
Uye saka ndinogona kukomborera hupenyu hwangu
Uye ita kuti ndifare zvishoma
Nekuti kugovana nemunhu uyu kurarama kwechokwadi
Ndatenda San Alejo makaropafadzwa
Zvekuteerera kuminamato yangu
Uye ndipe rubatsiro rwako rusingagumi ..
Wakafarira munamato weSan Alejo kuti udzinge munhu kuenda?
Kuenda pamunhu kunogona kuitika, mune dzimwe nguva, chiitiko chakaomarara kuita uye pane mamiriro ezvinhu anotitungamira kuva pedyo nevaya vanhu vatisingade.
Ndokusaka munamato uyu wakasimba kwazvo nekuti unotibatsira kuve munhu iyeye anotisiya nokuzvidira.
Izvo zvinoshanda kana tikazviita kuti zvitibatsire senge pane imwe nhengo yemhuri, sekunge mwana, uyo anowanzogadzira hushamwari husina kunaka uye, kukuvadza kusati kwarongeka, zviri nani kukumbira San Alejo kuti uchengete izvo munhu
Munamato weSan Alejo wokuparadzanisa vanhu nevadikani
San Alejo, iwe une simba rekubvisa zvakaipa zvese zvakapoteredza vakasarudzwa vaIshe, ndinokukumbirawo kuti usave kure ... (Taura zita remumwe wako)
Kubva… (Anotaura zita remudiwa wake) ndinokushevedza, ndinokukumbira kuti uende newe, ku… (Taura zita remudiwa wake) Mutore (kana) kunzvimbo yekukanganwa, Ngaarege kuzomboyambuka zvakare nzira ye… (Taura zita remumwe wako).
Sezvo hova dzemvura dzinomhanya, saka mhanya ku ... (Taura zita remumwe wako) Kubva ... (Taura zita remudiwa wako) Nokusingaperi.
Sezvaakasvika ... (Taura zita remudiwa wake) Kune hupenyu hwe ... (Taura zita remumwe wako) Kuti iye zvakare anobvisa kubva kuhupenyu hwake ipapo.
Kuti ivo havagone kuve pamwe kana mumba yekutandarira, kana mumba yekudyira, kana patafura yekudya, kuti ivo havagone kuvanzika pasina vanonzwa kusemeswa nekusemesana kune mumwe neumwe.
Ini ndinokubvunza iwe San Alejo, kana vaona kuti havaone, kana vachitaura ... (Taura zita remumwe wako) Uye ... (Taura zita remudiwa wako) kuti havachanzwisisane uye kuti kupatsanurana ndiko kwekupedzisira uye zvachose. Ini ndinokumbira mweya yemugwagwa kuti uteme nzira dzese kubva ... (Taura zita remumwe wako) Ku ... (Taura zita remudiwa wako).
Ndatenda San Alejo nekuenda kwangu.
Ini ndinokumbira kuti udzore mumwe wangu kudivi rangu rakapfidza, uye ndinopikira kutambanudzira uyu munamato nekutenda nerunyoro rwakatenderwa!
Namata munamato weSan Alejo kuti upatsanure vanhu vaviri vane kutenda kukuru.
Muhukama hwevaroorani, vechitatu mapato vanogara vakasara. San Alejo anotibatsira kuchengetedza kuwirirana muhukama hwevaviri ava pasina kushandurwa nevechitatu mapato.
Iye anoziva kukosha kwechokwadi kwemhuri uye ndosaka achitibatsira kudzinga vanhu avo vanotyisidzira kuputsa imba yedu.
Izvo hazvina basa kana iri ushamwari hwakareruka kana hwatova hukama hwevadikani, uyu munyengetero une simba uye unoshanda.
Kuti ndidzivise vavengi
Akakudzwa zvikuru Musande Alejo, wekutanga mambo weAlexandria, musandisiya kana husiku kana masikati, ndinokukumbirisaiwo kuti munditarise uye mundidzore kure kuvavengi vanopinda mukutenda kwakashata kwandiri.
Ndirwire uye undichengete kubva pasimba radhiyabhorosi, vanhu vakaipa, mhuka dzinotyisa uye zvevaroyi nouroyi. San Alejo, San Alejo, San Alejo, katatu ndinofanira kukushevedza.
Nguva dzose ini pandinopihwa, kuti iwe unondisunungura kubva pane zvakaipa zvese.
Matanda matatu ndinokupa, chinova chiratidzo chemuKristu akanaka, kuranga ruoko rwematsotsi, kune villain uyo anoda kundiitira zvisiri izvo.
Izvi zvichadambura rurimi rwevanoda kutaura nezvangu.
Ndinokukumbira, iwe une simba San Alejo, kuti usarase zvakapoteredzwa zveimba yangu uye kuti zvese zviri patsoka dzangu zvive zvekuisunga. Ameni Jesu
San Alejo de León, kana paine chero munhu aida kunditengesa, dai Mwari akarega mapapiro ake kubva pamoyo wangu uye auye azvininipise kwandiri, Jesu paakauya patsoka yemuchinjikwa.
Kana iwe uchida kudzora vavengi, uyu ndiwo munamato wakaringana kuna Saint Alexius.
Kune avo vanofunga kuti vavengi vanofanira kuva padyo kuti uvatarise, asi kune vavengi kuti zviri nani kuva nazvo, izvi zvichivenga kuvengana kwacho zvakananga.
Asi kune zvimwe zvakakomba zviitiko zvevanhu vakagadzirwa enda neshamwari asi pachokwadi ivo vavengi.
Mune zviitiko izvi munamato kuna San Alejo unotibatsira vadzinge kure nesu zvakasikwa uye pasina matambudziko.
Anoziva zvazviri kuti kuve nevavengi vangu vepedyo uye ndosaka akave Musande, yekubatsira vanhu kuwana rugare kunyangwe mamiriro ezvinhu akaoma atinowanikidzwa. Kurega kubva kumhuri neshamwari hachisi chinhu chakareruka asi kazhinji chinodiwa chaizvo.
Mutsvene Alexius, iwe unozadzisa zvese, Iwe unokwanisa kuona zvese, zvakanyatsojeka kwauri kuti ukwanise kusiyanisa mweya wangu uye uzive Kuti huvepo hwangu husina rudo, Sacred mine, ndibatsirewo kununura rudo, Wangu wandisiya uye kune imwe / kana kutsiva ini, Ita iyo kemesa iri pakati pavo ibudise, Vaitei vagare vakaparadzana.
San Alejo, ita rudo rwako rwakasiyana, Tsauka kubva kwaari / udzokere kwandiri, Kuti iwe urege kuzadzisa pasina ini kana kurota, Kuti parutivi rwako haasi munhu anofadza, Kuti ndiye wandinowana muhupenyu hwako, Muri wako. mubatanidzwa, mukufunga kwake uye mune ake fungidziro.
Rudo irwo rwanga rwuri rwangu, kuti ndirwo, Kuti mutorwa abvise paupenyu hwake, Iye munhu akamira pakati pake neni neni, Ngavadzimwe nezvido zvake, San Alejo, Kuti rudo runondibata.
Ini ndinokumbira kuti iye asazokwanisa kuve naye / iye, Kuti hupenyu hwake hahusisiri hwangu, uye saka ndinodzoka, Kuti mudiwa wangu anouya, San Alejo, ndinozvida, Zvakanaka iye / iye chinhu chakakosha.
Ausculta minyengetero yangu uye kukumbira kwangu, uye anondipindira.
Munamato uyu kuna Saint Alexander kwerudo wakasimba!
Iko kuda kwekuda uye kudiwa kwagara kuri iko kwakasimba kwazvo chinangwa che minamato. Kukwanisa kuwana rudo nekuumba imba, mhuri izere nekuwirirana uye kuona vana vachikura chiitiko chakanaka kwazvo chehupenyu icho vanhu vese vanofanirwa kurarama.
Nekudaro, anotaurira vamwe kupfuura vamwe uye izvi zvinokonzerwa nemifungo yakaipa iyo zvino inoita seyakawanda mumoyo.
San Alejo, paari pasi pano aikwanisa kurarama yerudzi rwerudo urwu nekuti aive nemhuri isati yazvipa zvizere kuna Mwari nekuda kweizvo.
Asi rudo haruna kusvika ipapo asi rwakakura nekushandurwa kuita simba iro kusvika nhasi unoita zvishamiso zvinoshamisa.
Kumubvunza chishamiso kuti uwane rudo rwechokwadi chiitiko chekutenda chichagara chine mhinduro nekukurumidza nekuti zvese zvatinokumbira baba muzita raJesu, baba vachatipa.
Tora mukana simba reminamato yose yeSan Alejo!
Munamato kuMhandara yeFatima